Wararka - Haddaba maxay u baahan yihiin kuwa cusub inay fiiro gaar ah u yeeshaan marka ay wax iibsanayaan?
Isagoo ka hadlaya telescopes-ka-meel-gaadhka ah, waxa jira laba nooc.Mid waa mid si fudud is haysta oo la qaadi karo, kan kalena waxaa loogu talagalay daawashada shimbiraha, cirka xiddigaha leh ama isticmaalka badmaaxidda.Dhab ahaantii, raaxada telescope-ka-lens-ku aad ayuu uga yar yahay kan binocular.Dabcan, qof kastaa wuxuu leeyahay baahiyo kala duwan.Aad bay ugu habboon tahay in si fudud loo ilaaliyo bartilmaameedka.Intaa waxaa dheer, haddii aad leedahay farqi weyn oo aragga oo u dhexeeya indhahaaga, monocular ayaa sidoo kale kugu habboon adiga.
1. Waynaynta: Waynaysaan inta badan waxa aad wax ka sii fogaanaysaa, laakiin isla markaa, gacan qaadka ayaa la waynaynayaa, taas oo ay u badantahay in ay keento dawakhaad.Waxaa lagu talinayaa in la doorto 7-10 jeer.
2. Caliber: Dhexroorku wuu weynaadaa, iftiinka badana waa la ururiyaa, muuqaalkuna wuu sii caddaanayaa.Dhexroorka weyn, miisaanku wuxuu u kordhin doonaa si waafaqsan.Waxaa lagu talinayaa in la doorto inta u dhaxaysa 30-50mm.Haddii aad leedahay gacan taagan, dooro tan ugu weyn.Haddii kale, qiyaastii 40 ayaa ugu fiican.Intaa waxaa dheer, in ka badan qiimahan waxaa inta badan loo isticmaalaa daawashada xiddigaha ama shimbiraha, waxayna u baahan tahay in lagu xasiliyo taageero.
3. Marka la eego qalabka priism-ka, tobanaan doollar ee telescopes-ka ah ee hal-tube ah waxay u badan tahay inay isticmaalaan walxaha BK7, oo leh gudbinta iftiin yar, natiijooyin yar, oo aan fiiqan, halka BAK4 ay leedahay gudbin iftiin wanaagsan iyo sawir cad oo dhalaalaya.
4. Marka la eego dahaarka ka-hortagga-milicsiga, inta badan ee daahan-ka-hortagga, ayaa sii caddaynaya sawirka.Guud ahaan, muraayadda muraayadda filimka hal-lakabka ah waa casaan ama buluug-buluug, filimka lakabka badan waa cagaar khafiif ah ama guduud mugdi ah, iyo filimka hal lakabka ah ee dhumucdiisuna waa cagaar (filim cagaaran oo qurxinta).).
5. IPX7 nitrogen biyuhu.Isticmaalka dibadda, biyuhu waa muhiim.Intaa waxaa dheer, nitrogen waa wax ku ool ah si looga hortago in lens ka soo baxa caariyaysi iyo horumarinta nolosha adeegga alaabta.